Kooha, iyo app yekufunga izvozvi kuti Wayland iri kuuya | Linux Vakapindwa muropa
Kooha, iyo app yekurekodha iyo skrini yekuchengeta mundangariro izvozvi kuti munhu wese ari kutarisa Wayland
Mumaawa angangoita makumi mana nemasere, Canonical ichaburitsa Ubuntu 48 Hirsute Hippo nezvose zvayo zviri pamutemo. Ichokwadi ndechekuti iyo vhezheni huru ichauya iine mashoma akakosha nhau, asi ichagadzira nzira yezvinoitika shanduro. Imwe yeshanduko dzinonyanya kushamisa ndeyekuti inoshandisa Wayland nekukasira, iyo graphical server protocol iyo inogona kupa yakawanda, asi parizvino haina kuenzaniswa. Nechikonzero ichocho, izvozvi pane mashoma maficha senge kooha.
Para rekodhi rekodhi yeLinux-based operating system pane zvakawanda zvisarudzo. Imwe inoshandiswa zvakanyanya ndeyeSoftScreenRecorder, chaizvo nekuti iri nyore rekodhi rekodhi. Dambudziko nderekuti, zvirinani sekunyora uku, hazvishande muWayland. Iyo app inoshanda ndeyeKooha, uye zvakare iri nyore, asi iri kutora matanho ayo ekutanga uye ichiri kufanira kugadzirisa mune zvimwe zvinhu, senge rutsigiro.
Kooha anoshanda paGNOME
Kubva pakuonekwa kwayo, Kooha anoshandisa iyo yemuno uye isingazivikanwe GNOME kurekodha kukwanisa kugadzira macaptures. Izvo zvinogona kutsanangura kuti nei ichingo shanda mune yakajeka graphical nharaunda inoshandiswa nekuparadzirwa senge Ubuntu kana Fedora. Uye hazvishande chete pa Wayland; tinogona zvakare kuishandisa muX11. Kana zviri zvekureruka kwazviri, chimiro chayo chinoita kuti zvisakwanise kuvhiringidzika: pachiratidziri chikuru tine mabhatani matanhatu: imwe yekusarudza kurekodha izere skrini, imwe nzvimbo yakatenderera, pazasi tinogona kusarudza kurekodha ruzha rwechirongwa , maikorofoni uye kuti pointer inoratidzwa uye pazasi isu tine bhatani rekurekodha.
Mune sarudzo, chinhu chega chatinogona kumisikidza inguva yekunonoka kuitira kuti tive nenguva yekudzora mashandisiro uye fomati yatichachengeta, pakati payo tinogona kusarudza MKV kana WebM. Kubva pachikamu chimwe chete isu tinogona zvakare kuona mapfupi ekhibhodi.
Asi Kooha ane yakaoma kunzwisisa chinokanganisa: hatigone kudzikisira iyo app. Tine sarudzo mbiri: imwe ndeyekusiya hwindo pakati pechiitiko. Imwe yacho ndeyekuti, kana kugoverwa kwedu kusinayo nenzira iyoyo nekumisikidza, tichiita tinya padoko icon kudzikisira kunyorera, chimwe chinhu chatinogona kuwana nekuchaira uyu murairo:
Kana isu tichida kugadzirisa shanduko, isu tinofanirwa kushandura 'set' kuti 'itangezve' uye bvisa 'kudzikisa'.
Kuisa Kooha, sarudzo yakanakisa ndeyekuisa yako flatpak package, kunyange vashandisi veArch Linux vanayo zvakare muAUR. Inogona zvakare kuiswa nemirairo iyi:
Ndichakamirira mamwe maapplication ekuvandudza uye nekuwedzera rutsigiro rweWayland, Kooha isarudzo. Zvisingapfuure yevashandisi veGNOME.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kooha, iyo app yekurekodha iyo skrini yekuchengeta mundangariro izvozvi kuti munhu wese ari kutarisa Wayland
Yakanakisa graphical backup apps yeLinux
OpenDroneMap: drone mapping software